"Sirna abbaa irree diignee sirna dimokiaarsiitti cehuutti jirra Injifannoo argamte jabeessaa hujii gara fuulduraa hojjadhaa jechaa jirra"
Bitootessa 27, 2019
Daarekterii OMN,Jawaar Mohaammad istuudiyoo VOA,DC Keessatti
Dr.Abiy Ahmed ganna tokkoo hardha muummee ministera Itoophiyaa tahe. Jijjiiramii sun fala hedduu biyyattiin dhufe nama hedduu nama gammachiise.
Daarekterii OMN,Oromia Media Network, Jawaar Mohaammad biyyatti deebihuun durattuu akka namii qabbanaahee injifanno argate jabeeffatu Gaafachaa baanee jedha.
“Hojii irratti akka fuulleeffatan dhaamaa baane.Ummatii akka malee nu dhagahe. Hooggansii garaa nu hin geenne.”
Waan silaa jijjiirama lafa qabachiisaa keessaa akka daarekter Jawaar jedhetti tokkummaan ummataa, tokkummaan hayyootaa, hooggantoota siyaasaatii fi paartilee ka jabaatu. ”Baayyee carraaqne garuu guutuutti hin milkoomne hooggansi nama ufitti qabu hin dandeenne.”
Abbootii qabeennaallee walti qamnee gurmeessuu hin dandeennee jedhe.Akka jecha Jawaaritti namii abbootii gadaa, sheekii,qeesii fi diqqaa guddaa isaa caqasee jijjiirama miila gadi dhaabe.
“Muummichi Minsitea waan Qeerroo irraa hafte diige jijjiirama guddaa fide." Paartii biyya bulchitu qofa irratti gatuun ammoo isaan ufi dagachiisee jennee ufi gaafanne," jedhe Jawaar.
OMN Afrikaa keessatti humna jabeessuu fi jijjiirama jiru lafatti jabeessuuf biyyatti gale.
Akka Jawaar jedhetti OMN onnee guutuun hojjachuutti jira.Istudiyoo Naayroobitti banatan,baruullee Gulullee jalqaban,ammallee Shaashamannee ,Dirree Dawaatti ammoo istuudiyoo banachuuf kurfoo jiran.
OMN sun malee silaa raadonii FM Finfinneetti banachuuf haga ji'a jahaati asi gaafachuutti jira.Biyya keessa ammoo akka Jawaar jedhetti FM Afaan Oromoo hin tahin 22tti jira.
Wal dhaba Itoophiyaa: Akka Jawaar jedhutti wal dhabii Itoophiyaa waan akka akkaatti dhufaan.Kana keessaa tokko seenaa.Biyyitii bara hedduu keessa dhufte. Biyyitii jaalala ummataatiin hin jaarmane. Biyyit humnana jaaramte. Godaannisi seenaa tuttuqamee dhiigu jira.”
Federalaaliziim sabaa irratti yayyabamelleen akka Jawaar jedhetti “qabeennaa fi angoo naannoon sun qaban irratti abbummaa guutuu hin kennineef. Naannoof hajaja gubbaa dhufu malee waliin mari’atani fixuu irratti rakkootti jira. Bilisumaan ammaa tun akka warrii ukkaamne sosochhu godhe walti bu’u godhe.”
Falii guddaan akka Jawaar jedhetti rakkoo jirtuu fala jabaa lafa kaahuu wayya. Falii kun karaa egerii biyyiti irra deemtullee nama agarsiisa.
“Walitti bu’iinsii Itoophiyaa shakkii fi hamiin godhamaa jira.Median ammoo yoo rakkoo tana gabaasu dhugaa jirtu qofa baasuu qaba sun irratti ufi eegachu male jedha.
Yaadii Jawaar Finfinnee kunoo:
Finfinnee lafa Oromiyaati,Finfinnee bakka nami keenna irraa buqqahe. Lafa saba fi sabalammiiti.Sabni biraa abbaa 5-6 irratti wal hore.Mirgii isaanii seeraan eegamuuf qaba.Finfinneen dhugaa Oromooti.
Dubbiin Finfinnee akka Jawaar jedhetti silaa amma kahuu hin malle.Angoon mootummaan Oromiyaa Finfinnee irratti qabulleen seeraan beekamuu qabdi. Ummatii Finfinnee bakka bu’aa filatee rakkoo jirtu seeraan fixuu qaba. “Wacaa ammaa kanaan hin taatu.”
OMN istuudiyoo isaa Amerikaa,MN jirullee banuutti jira. “Oromiyaa fi addunyaa walti hidhuuf hojjanna.
Filannoo Itoophiyaa:Dheerachuu fi gabaabachuu filannoo Itoophiyaa ta dhuftuu irratti Jawaar filannoon duratti waan guutamuu male jiraa jedha.Sun ammoo egerii bal'innaan irratti dubbata.